Okwamanje, kunezinhlobo eziningi omkhulu ukubhebhetheka kwezifo ezithathelwanayo, okuyinto cishe kungenakwenzeka ukusingatha ngaphandle nokusetshenziswa kwamaphilisi. Kuyinto efiselekayo ukuthi izidakamizwa wawukwazi ukuba nomphumela omubi inqwaba izilokazane ezincane. Lezi zihlanganisa i-"Cefoperazone + Sulbactam." abajwayelene angeziwe nge izinkomba ukusetshenziswa kwalesi izidakamizwa.
Umuthi iyatholakala njengoba powder isixazululo. Iqondiswa ngemithambo yegazi noma intramuscularly. Ingqikithi asebenzayo kuyinto inani ceftazidime 1 g
Izidakamizwa "Cefoperazone + Sulbactam" (egameni lendawo yokuhweba noma - "Sulperazon" noma "Sulperatsef") futhi uyilungu leqembu izidakamizwa elwa namagciwane.
Lesi sidakamizwa kungokwalabo indlela kuhlanganiswe. Nomuthi "Cefoperazone" kuyinto-antibiotic ebanzi bohlu. Uye waba nomthelela omubi kakhulu eziphilayo aerobic kanye anaerobic virus.
Ukulungiselela "Sulbactam" kuyinto inhibitor engelapheki we-beta-lactamases. It kuvimbela ukubhujiswa penicillins futhi cephalosporins, kusukela nemibukiso kwakwakhe Synergy nabo.
I nomuthi "Cefoperazone + Sulbactam" uzabalaza umphumela wawo onqabayo amaseli by ezivimbela peptidoglycan, okuyinto kuyingxenye esisemqoka-bacterium izindonga.
Izidakamizwa excreted ngaphandle komzimba mayelana 8 amahora umchamo. Ingxenye-ukuphila cishe amahora amabili. Uma isiguli ethola nemithi, ehlushwa isifo sesibindi, kuyilapho izidakamizwa excretion iyakhula.
Ikhodi JECFA "Cefoperazone + Sulbactam» - 24.42.11.228. Izidakamizwa ekhiqizwa eNdiya.
Umuthi kuboniswa ngenxa khona izifo ezithathelwanayo libangelwa nezilwanyana ezincane nozwelo ketshezi asebenzayo. Lezi zihlanganisa:
Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini.
Ezithathelana kohlelo urinary, ezifana cystitis, isipatsholo, prostatitis, vulvovaginal.
Izifo zesikhumba imvelo ezithathelwanayo: furunculosis, pyoderma, abscesses nabanye.
Ezithathelana ngaphakathi ngokuhlanganyela.
Umuthi futhi kuthathwe njengoba isilinganiso izifo yezinkinga ezibangelwa amagciwane emva kokuhlinzwa.
Ukulungiselela "Cefoperazone futhi Sulbactam Dzhodas" ubizwa nangokuthi kuboniswe peritonitis, cholecystitis, cholangitis nezinye izifo naphakathi-besisu. Injongo izidakamizwa ukutholakala kanye nesikhathi yokwelapha kanye nokwelashwa zemithi kufanele bakwenze kuphela udokotela.
Kusho "Cefoperazone futhi Sulbactam Spencer" bunikezwe ngenjongo zokuvimbela.
Ubani alikukhuthazi ukuthatha imithi
Naphezu anhlobonhlobo izenzo, leli thuluzi asikwazi ukwamukelwa ngaphansi kwezimo ezithile:
Ephambi kwezinduna hypersensitivity emuthini.
Phakathi ibele "Cefoperazone + Sulbactam" ubizwa nangokuthi contraindicated.
Kwezinso ukwehluleka hepatic kudinga isicelo niqaphelisise.
Ephambi kwezinduna nesifo emlandweni sesiguli.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngalo muthi kumelwe qiniseka ukuxoxa nodokotela wakho khona Izimo.
imiphumela engathandeki ngesikhathi yokwelapha
Izidakamizwa "Cefoperazone + Sulbactam" egameni lendawo yokuhweba noma kuyinto "Sulperazon" ngesikhatsi ukwelashwa kungabangela okubonakalisa elandelayo side effects:
Kusukela uhlelo urinary angagcina hematuria.
Isimiso senhliziyo nemithambo yegazi angaphendula ukwehla komfutho wegazi noma vasculitis.
Ukuhlaziya igazi phakathi ukwelashwa izidakamizwa avame Ukwehla elithwala umoya-mpilo, hematocrit encishisiwe, thrombocytopenia, eosinophilia, leukopenia nezinye kwezinso.
amazinga albumin encishisiwe.
Bilirubin encephalopathy e izinsana kungaba ne-jaundice.
On the ingxenye pheshana emathunjini kungase dyspepsia, ukuhlanza, isicanucanu futhi ngikhishwe nesifo pseudomembranous.
On the isikhumba zingavela amawala, maculopapular ukuqubuka, kanye ukulunywa ezinzima.
izifundo Laboratory baye babonisa enanini eliphakeme umsebenzi ukuhlolwa isibindi.
Imithi umjovo indawo soreness atholakalayo, lapho zaphathwa ngemithambo yegazi ngokusebenzisa ipayipi - phlebitis.
Mancane kakhulu amathuba okuba ukuzwa ubuhlungu bekhanda, imfiva, nezinye ukusabela anaphylactic umzimba.
Ngezinye okuvela iyiphi ukubonakaliswa engathandeki kudingeka nixoxe ngale ndaba nodokotela wakho. Kungase kudingeke ukuba aphinde acabange umthamo lesi sidakamizwa "Cefoperazone nge sulbactam" noma ukhansele ngokuphelele.
Lokho okungalindelwa nge ukweqisa izidakamizwa imithi
Uma uthatha le izidakamizwa ngaphansi kokuqondisa esiqinile udokotela, i-ukweqisa izidakamizwa akufanele ukhathazeke, kodwa self-ukwelashwa ngokuvamile kungenzeka. Uma umzimba wathola izidakamizwa okuningi kuka liyadingeka, kungase kube iziyaluyalu esithinta izinzwa, kuhlanganise nokuquleka.
Ukwelashwa kuleli cala kwenziwe ngokuhambisana izimpawu. Indlela ephumelela kakhulu kuyinto hemodialysis.
Isikali futhi Ukwelashwa Regimen
Uma imithi esimisiwe 'Cefoperazone + Sulbactam "imfundo manual incoma ukuthi bafake izidakamizwa ngemithambo yegazi noma intramuscularly. Ezigulini omdala umthamo wansuku zonke ngokuvamile kusukela 2 kuya ku-4 amagremu isithako esebenzayo. Le mali kufanele ihlukaniswe izigaba ezimbili.
Uma isiguli sine-ezinzima ukutheleleka umthamo kungenziwa lenyuke kuya kwezingu-8 amagremu, okuyinto kumelwe futhi ihlukaniswe ngemithamo ezimbili ngosuku. Uma kungekho izifo ezihlobene okungamahlalakhona, iningi iziguli, futhi umthamo nsuku zonke inani 12-16 amagremu ukubekezelela ngaphandle sobala engemihle.
Isikhathi yokwelapha kunqunywa udokotela. Ngokwesibonelo, lapho ayinzima urethritis gonococcal iqondiswa yesikhathi esisodwa 500 mg zomuthi.
Ngenhloso zokuvimbela izinkinga ngemva kokuhlinzwa ukulungiselela iqondiswa isiguli 1-2 g ngemithambo yegazi ihora elilodwa ngaphambi ukusebenza. Lokhu umthamo kungase kuphinde kushiwo abanye ngemuva kwamahora angu-12. Uma ukuhlinzwa wenziwa nge kwengozi yokuthola ezifana ukutheleleka, ekuphathweni prophylactic iqhubeka 3 izinsuku emva inkomfa.
Iziguli kufanele abahluphayo izinso, izidakamizwa "Cefoperazone + Sulbactam" inikezwa ngezilinganiso ezingekho ngaphezu 4 amagremu ngosuku. Uma kukhona izinkinga kanye isibindi, umthamo yehla ngisho kabili.
Kusukela izidakamizwa ingasatshenziswa ngemithambo yegazi futhi intramuscularly, kukhona ezinye izici uhlelo lwayo lokusebenza.
Lapho iqondiswa ngemithambo yegazi njengoba kuphela ngoba powder ingasetshenziswa:
5% isixazululo dextrose.
amanzi Oyinyumba ngoba umjovo.
Lapho iqondiswa ngemithambo yegazi, lo powder kwelinye isitsha kumele ziyoncibilika 10 ml kuphela ofanele. Kuyadingeka ukuba ulinde nokonakala ephelele kanye izidakamizwa iqondiswa kancane imizuzu engaphezu 3-5.
Uma ziconse imithi "Cefoperazone + Sulbactam" imfundo manual uncoma 1 igremu isithako esebenzayo. Lokho, okuqukethwe omunye isitsha siyochithwa e 5 ml amanzi umjovo, bese wengeza ikhambi ukumnika, ngokuletha emakamu ukuba 20-100 mg / ml. Sikhishwe inani isixazululo iconsa, ukuxhaphaza isikhathi kungenzeka kusuka imizuzu 10 kuya ku-30.
ekuphathweni esicutshini ukuncibilikisa powder lingasetshenziswa noma amanzi umjovo noma i-sodium chloride. Isilinganiso ngokuvamile esetshenziselwa kanje: 0.5 g umkhiqizo ukuthatha 2 ml we kuphela.
Kusukela lapho imithi iqondiswa ngokuvamile kwenzeka ubuhlungu endaweni umjovo, kunconywa ukuthi ekulungiseleleni isixazululo izidakamizwa wanezela "Lidocaine 2%", kodwa kuphela ngaphansi kwesimo sokuthi isiguli akuyona iguliswa izidakamizwa.
Ngoba noma yisiphi isifo esithathelwanayo imijovo ukunikeza nomphumela omuhle ishesha, ngakho imijovo yaphathwa "Cefoperazone + Sulbactam." Tablets nazo ahamba kancane kakhulu kunalokho.
Izingane ngokuvamile uhlushwa izifo ezithathelwanayo for okungekho imithi elwa namagciwane abanakukwazi ukwenza. I umthamo zonke izinsuku we esebenzayo izidakamizwa cefoperazone core kumele tisukele mg ngayinye amakhilogramu isisindo isidumbu sengane 50 200. izidakamizwa Iphathwe kumele zilingane izingxenye by ekwehlukaniseni ngezigaba ezimbili.
Desirably, umthamo wansuku zonke ingeqi 12 F. Uma umuthi injected bolus, umthamo iyunithi kumele singeqi 50 mg / kg.
Izinsana kungabuye iqondiswa 50-200 mg zomuthi ngamunye isisindo amakhilogramu umzimba, ukukucaza kube izigaba ezimbili ngokusebenzisa amahora angu-12. Ngokusekelwe kweminyaka eminingi ngokoqobo ithuluzi ekwelapheni izingane, kungashiwo ukuthi imithamo kuze ku-300 mg amakhilogramu esisindo ngosuku ngamunye kahle ikubekezelele izingane, ngisho khona webhaktheriya meningitis.
Medicine nge esebenzayo isithako ceftazidime onikezwe abesifazane kule sikhundla kuphela uma uthi enjalo lapho izinzuzo umama okhulelwe izikhathi eziningana mkhulu kunezinhliziyo ingozi ezingase zisetshenziselwe ukuba umntwana okhulayo. Uma ufuna ukusebenzisa imithi ngesikhathi ibele, udokotela uyoncoma ngalesi sikhathi ukuze uthumele umntwana ibele yokufakelwa.
Izidakamizwa "Cefoperazone" ezindaweni zayo kwemithi kungukuthi kuhlangene i aminoglycoside. Uma kukhona isidingo therapy yala maqembu amabili izidakamizwa, basuke yaphathwa ngendlela abaphathi ngakanye nge ipayipi ezimbili ezihlukene.
Co-nokuphathwa izidakamizwa nge thrombolytic, antiplatelet futhi ama-NSAID kwandisa ingozi ebangela ukopha.
Ezigulini ezine-izinso izinkinga yokwamukela a nomuthi "Cefoperazone Sulbactam" kanye aminoglycosides futhi isisu ukuthuthukiswa kubabangele ka nephrotoxicity.
Phakathi ukwelashwa nge "Cefoperazone" engathandeki ukuba uphuze utshwala, kungenjalo kungase sibangele lezi zimpawu zokugula:
Ngaphambi kokuba uqale ukwelashwa ngalo muthi, kufanele wazise udokotela wakho mayelana yonke imithi abayiswa okwamanje.
Okufanele ukwenze uma contraindicated izindlela "Cefoperazone"? Analogs kungase kuthathe indawo kahle kuye.
Ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama usebenzisa izidakamizwa
Phakathi ukwelashwa nale imithi kufanele baqaphele ngokukhethekile ukuba labo iziguli komzimba zivame uyalandelwa. Ingozi le ukuzwela anda igcwele ngisho ukubulala. Uma ngesikhathi yokwelapha waphawula ngisho ezincane komzimba, lesi sidakamizwa "Cefoperazone + Sulbactam" kumele isuswe ngokushesha futhi esikhundleni salo ngezinye izindlela.
Uma isiguli sine-degree okunzima isimiso ipheshana biliary, izifo zesibindi nezinso, idinga izinkinga umthamo ukulungiswa ngabanye. Ephambi kwezinduna ukungakhuli so-renal kanye hepatic kufanele njalo ukuqapha lokuhlushwa esebenzayo izidakamizwa ketshezi serum. Ngisho ngaphandle umthamo ukulawula akufanele idlule 2 amagremu ngosuku.
Kwezinye iziguli ngesikhatsi ukwelashwa nge "Cefoperazone" bethuthukisa vitamin K ukuntula Ngokuvamile, le nkinga uvele labo babe ukudla onesici, malabsorption, noma ukuhlupheka kuqhubeke isikhathi eside ivuliwe yokudla emthanjeni. Iziguli belashwa nge anticoagulants, isidingo njalo ukuqapha isikhathi prothrombin, futhi, uma kunesidingo, khetha engayitholi ezengeziwe vitamin K.
Uma udinga Yiqiniso eside ukwelashwa, "Cefoperazone", kungenzeka ukwandisa amagciwane ukuthi akuzona ekuthonyweni lokhu nomuthi. Kudinga ukuqapha ngezikhathi izinkomba ukusebenza kwezitho zangaphakathi, ikakhulukazi isibindi, izinso kanye hematopoiesis. Lokhu kubalulekile ikakhulukazi ekwelapheni neonates, izinsana izingane kanye nezinsana ngaphambi kwesikhathi.
Phakathi ukwelashwa kufanele uyeke ukushayela futhi imisebenzi ezidinga lokuhlushwa ezingaphezu.
Uma sicabanga yimuphi izidakamizwa, kungenzeka amaqembu amabili okukhulunywa amalungiselelo analogs futhi omqondofana. Ukuze omqondofana zihlanganisa imithi ukuthi ukubunjwa zabo isithako efanayo esebenzayo. Ukuze "Cefoperazone" izidakamizwa, lawa:
Uma siqhathanisa nomuthi "Cefoperazone" analogs ungaba izingxenye ezengeziwe ngaphezulu, okuyinto kanye into eziyisisekelo nethonya ukuhluka. Yingakho kukhethwa izidakamizwa ezinjalo kufanele wasondela ngendlela efanele futhi sizamukele kuphela kadokotela.
Elinye iqembu analogue kukhona imithi nge efanayo isenzo kwemithi. Uma uthatha le izidakamizwa "Cefoperazone + Sulbactam" analogue kuleli qembu:
Powder "Azaran" I-imijovo emthanjeni.
Powder ngoba umjovo "Bestum".
"Tsefantral" kanye nabanye abaningi.
Ngisho nemiphumela efanayo kwemithi zomuthi ngenxa izinto asebenzayo ezahlukene kungaba nemiphumela ehlukene kwi emzimbeni, ngakho ungakhethi imithi yabo, esekelwe yokusetshenziswa.
Labo ezigulini akazange kanye ayisebenzisa kaningi "Cefoperazone + Sulbactam" izidakamizwa ukuze ukwelapha izifo ezithathelwanayo, waphawula kahle yaso ephezulu. Abaningi baphikisa ngokuthi izifo genitourinary esilaphekayo ngokushesha futhi ngaphandle izinkinga.
Umama izingane ashiye pro izidakamizwa "Cefoperazone" Izibuyekezo sasivumela omuhle. Baqaphela ukuthi izingane ukubekezelela izidakamizwa kahle ngisho khona co-morbidities. Kufanele wakhumbula ukuthi imishanguzo ezinjalo kufanele kwenziwe kuphela esibhedlela, ikakhulukazi izinsana.
Ukwamukelwa kwanoma yimaphi ama-antibiotic kudinga kakhudlwana umsebenzi wokugaya ukudla. Ukuze silondoloze ibhalansi microflora, kuyinto efiselekayo kanyekanye ukuthola imithi ezifanele, isibonelo, "Linex". Lo mbuzo Ungahlala kanjani, kuzoxoxwa ngakho nodokotela wakho.
Tartu Ancient futhi engaqondakali ezikhangayo
Marketer. Izibophezelo ulwazi oludingekile